Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Hibru 9:1-28
Ozi dị nsọ a na-eje n’ụlọikwuu n’ụwa (1-10)
Kraịst ji ọbara ya banye n’eluigwe (11-28)
Onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ (15)
9 N’ọgbụgba ndụ nke mbụ ahụ, e nwere iwu na-achị ozi dị nsọ a na-eje,+ ụlọikwuu* ya dịkwa n’ụwa. 2 A rụrụ ụlọikwuu a ka o nwee nkebi abụọ. Ihe ndị dị ná nkebi nke mbụ bụ ihe e ji adọsa ọkụ,*+ tebụl, na achịcha a na-enye Chineke.+ A na-akpọ nkebi a Ebe Nsọ.+ 3 Ma, nkebi nke abụọ nke ụlọikwuu a dị n’azụ ákwà mgbochi nke abụọ.+ A na-akpọ ya Ebe Kacha Nsọ.+ 4 Ihe dị ná nkebi a bụ ihe e ji ọlaedo mee e ji etinye insens*+ nakwa igbe ọgbụgba ndụ+ nke e ji ọlaedo machie ahụ́ ya niile.+ Ihe ndị dị n’ime igbe ọgbụgba ndụ ahụ bụ ite ọlaedo nke mana dị n’ime ya,+ mkpanaka Erọn nke wara okooko,+ na mbadamba nkume abụọ+ e dere ihe Chineke na ndị Izrel gbara ná ndụ. 5 N’elu igbe ahụ, e nwere ndị cherob dị ebube, ndị ji nku ha sachie okwuchi igbe ahụ.*+ Ma ihe a abụghị oge a ga-ekwucha ihe niile gbasara ihe ndị a. 6 Mgbe a rụchara ihe ndị a otú a, ndị nchụàjà na-abanye ná nkebi nke mbụ n’ụlọikwuu a mgbe niile na-eje ozi dị nsọ.+ 7 Ma, ọ bụ naanị nnukwu onye nchụàjà na-abanye ná nkebi nke abụọ. Ọ na-abanye na ya otu ugboro n’afọ.+ O mekataghị banye ma ọ bụrụ na o jighị ọbara+ o ji achụ àjà maka mmehie ya+ nakwa maka mmehie ndị Izrel+ mere n’amaghị ụma. 8 Mmụọ nsọ si otú a mee ka o doo anya na e mebeghị ka a mata ụzọ e si abanye n’ebe nsọ mgbe ụlọikwuu nke mbụ ka dị.+ 9 Ụlọikwuu a bụ ihe atụ maka oge a.+ A ka na-enyekwa onyinye ma na-achụ àjà otú e kwuru ka a na-eme.+ Ma, ihe ndị a anaghị emeli ka akọnuche onye na-eje ozi dị nsọ zuo okè.+ 10 E nweghị ihe ọzọ dị n’onyinye na àjà ndị ahụ ma ọ́ bụghị naanị okwu gbasara ihe oriri na mmanya na ụzọ dị iche iche e si eme ka ihe dị ọcha.*+ Ha bụ iwu e nyere gbasara ahụ́.+ A chọkwara ka a na-edebe ha ruo oge a ga-eme ka ihe ka mma. 11 Ma, mgbe Kraịst bịara ka nnukwu onye nchụàjà, o wetara ihe ọma ndị dị ugbu a. Ọ banyekwara n’ụlọikwuu ka ukwuu a na-ejighị aka rụọ, nke kakwa zuo okè, ya bụ, nke na-adịghị n’ụwa a. 12 O jighị ọbara ewu na nke oké ehi banye, kama o ji ọbara nke ya banye n’ebe nsọ ahụ.+ Ọ banyere naanị otu ugboro ma napụta* anyị. Nnapụta a na-adịru ebighị ebi.+ 13 N’ihi na ọ bụrụ na ọbara ewu na nke oké ehi+ na ntụ ehi e fesara ndị na-adịghị ọcha na-edo ha nsọ ma mee ka ahụ́ ha dị ọcha,+ 14 o doro anya na ọbara Kraịst ga-eme ihe karịrị ihe ọbara ndị ahụ mere.+ Mmụọ ebighị ebi duziri ya, ya enyefee Chineke onwe ya ka àjà a na-emerụghị emerụ. Ọbara ya na-asachapụ ọrụ dị iche iche na-abaghị uru* n’akọnuche anyị+ ka anyị wee na-ejere Chineke dị ndụ ozi dị nsọ.+ 15 Ọ bụ ya mere o ji bụrụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ,+ ka e wee kwe ndị a kpọrọ nkwa na ha ga-enweta ngọzi* na-adịru mgbe ebighị ebi.+ Ihe niile a nwere isi n’ihi ọnwụ ya nke e si na ya gbapụta ha+ ma tọhapụ ha ná mmehie ndị ha na-eme n’ọgbụgba ndụ mbụ ahụ. 16 N’ihi na ọ bụrụ na mmadụ na Chineke agbaa ndụ, mmadụ ahụ ga-anwụrịrị ka ọgbụgba ndụ ahụ nwee isi. 17 N’ihi na ọ bụ ọnwụ na-eme ka ọgbụgba ndụ nwee isi. Ọ naghị enwe isi ma ọ bụrụ na onye kwesịrị ịnwụ ka nọ ndụ.* 18 N’ihi ya, ọ bụkwa ọbara ka e ji mee ka ọgbụgba ndụ mbụ ahụ nwee isi. 19 N’ihi na mgbe Mosis gwachara ndị Izrel niile ihe niile e kwuru n’Iwu ahụ, o weere ọbara oké ehi na nke ewu, gwakọta ha na mmiri, jirizie owu na-acha uhie uhie e kere n’okporo osisi hisop fesa ọbara ahụ n’akwụkwọ* ọgbụgba ndụ, fesakwa ya ndị Izrel niile, 20 wee sị: “Ihe a bụ ọbara nke na-eme ka ọgbụgba ndụ unu na Chineke nwee isi. Ọ chọrọ ka unu debe ọgbụgba ndụ a.”+ 21 O fesakwara ọbara ahụ+ n’ụlọikwuu na n’arịa niile e ji eje ozi dị nsọ.* 22 Dị ka Iwu ahụ* kwuru, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na e ji ọbara eme ka ihe niile dị ọcha.+ A naghị agbaghara mmehie ma ọ bụrụ na a wụpụghị ọbara.+ 23 N’ihi ya, o kwesịrị ekwesị na e si otú a mee ka ihe ndị nọchiri anya+ ihe ndị dị n’eluigwe dị ọcha.+ Ma, ọ bụ àjà ka mma ka e ji mee ka ihe ndị dị n’eluigwe dị ọcha. 24 N’ihi na Kraịst abanyeghị n’ebe nsọ e ji aka rụọ,+ nke bụ́ ihe atụ nke ezigbo ebe nsọ,+ kama ọ banyere n’eluigwe,+ nke mere o ji pụta ugbu a n’ihu Chineke maka anyị.+ 25 Ọ bụghị ka ọ na-achụ onwe ya n’àjà ugboro ugboro otú nnukwu onye nchụàjà si eji ọbara na-abụghị nke ya abanye n’ebe nsọ kwa afọ.+ 26 Ma ọ́ bụghị ya, ọ ga na-ata ahụhụ mgbe mgbe malite mgbe a tọrọ ntọala ụwa. Ma ugbu a, ọ pụtara naanị otu ugboro n’ọgwụgwụ oge a* ka o si n’àjà o ji onwe ya chụọ wepụ mmehie.+ 27 Otú ahụ ọ bụ na ihe na-echere ụmụ mmadụ bụ ịnwụ naanị otu ugboro, e mechaa, e kpee ha ikpe, 28 ọ bụkwa otú ahụ ka a chụrụ Kraịst n’àjà naanị otu ugboro ka o buru mmehie ọtụtụ ndị.+ Mgbe ọ ga-apụta nke ugboro abụọ, ọ gaghị abụ ka o wepụ mmehie, ndị na-achọsi ya ike ka a zọpụta ha ga-ahụkwa ya.+
^ Ma ọ bụ “ebe nsọ.”
^ Ma ọ bụ “ebe a na-ekpuchi mmehie.”
^ Na Grik, “ụdị baptizim dị iche iche.”
^ Na Grik, “gbapụta.”
^ Na Grik, “ọrụ nwụrụ anwụ.”
^ Ma ọ bụ “ihe nketa.”
^ O nwekwara ike ịbụ anụmanụ ga-anwụ.
^ Ma ọ bụ “n’akwụkwọ mpịakọta.”
^ Ma ọ bụ “e ji ejere ọhaneze ozi.”